I-Eco StayBus, 'Ikhazimla eParadesi' kuNxweme oluseMpuma - I-Airbnb
I-Eco StayBus, 'Ikhazimla eParadesi' kuNxweme oluseMpuma
Ibhasi sinombuki zindwendwe onguGrahame And Andrea
UGrahame And Andrea yi-Superhost
Siyibiza ngokuba 'yiBus that Rocks'. Indawo eyodwa, ngaphandle kwegridi, abathandi bendalo baphupha indawo yokuhlala. Ibhasi yeMercedes yebhasi ehlaziywe ngokupheleleyo kwaye yenziwe ngokutsha yokwenene. Inendawo yokulala yabantu aba-4 kunye nendlu yangasese yangaphakathi kunye negumbi lokuhlambela elineshawari ye-al fresco bamboo.
I-Eco StayBus, 'ibhasi eqengqelekayo'
Indawo yokuhlala ekhethekileyo yeeholide. Sifumene ibhasi yeMercedes yeBhodi yezoThutho yaseBarbados enkulu, engasafunekiyo. Ihlaziywe ngokupheleleyo kwaye yatshintshwa njengebhasi yeReggae - siyibiza ngokuba 'yiBus eRocks'. Inendawo yokulala yabantu abane (ubukhulu bokumkanikazi kunye neebhedi ezimbini zabantu abangabodwa) ikhitshi elinezitshisi zegesi kunye nebhokisi yomkhenkce, idinette yokuhlalisa abantu abane kunye negumbi lokuhlambela (indlu yangasese kunye nesitya sokuhlamba izandla. ) Ishawari yeal-fresco ivalwe ngaphakathi. I-bamboo yendawo kwaye ibekwe kumgangatho ongasemva. Ukutya kwe-Al fresco nako, kunye netafile ye-rattan kunye nezitulo kwidesika-izitulo ezongezelelweyo zedekhi nazo! Idekhi yeenkuni iqhuba ubude bebhasi kunye nobubanzi bayo ngasemva. Ngaphandle kwebhasi kukho i-barbeque grill enezixhobo kunye nomgodi womlilo (ukuba uthanda iibhonfire).
Wonke umbane onikezelwa kwibhasi yethu ngumbane welanga kwaye ubandakanya ukukhanya kwe-LED kunye nenkqubo yesandi somculo. I-Intanethi ye-Wi-Fi iyafumaneka kwabo banqwenela ukuyisebenzisa.
Ke ngoku ungaphila kwindawo enekhabhoni engathathi ntweni kwaye ubuyisele kuMama weNdalo. "Ubomi Obulungileyo" kwakhona.
Ibhasi ibekwe phantsi kwemithi yekhokhonathi kunye nomthi womkhiwane omkhulu weentshebe (emva koko iBarbados yafumana igama layo), inomyezo wayo wetropiki kunye nokufikelela kwindlela yangasese; ukanti ikumgama okhwazayo wendlu enkulu yase-Ecolodge (thina). Imbono yoLwandlekazi lweAtlantiki ukuya empuma kwaye uyafunga uyakubona ucocekile ukuya eNtshona Afrika kunye nokuphuma kwelanga okumangalisayo okubomvu nokuorenji. Ukuba uyayithanda indalo, unokuhamba umgama oziikhilomitha ungaphazanyiswa kwaye ubone izilwanyana zasendle ezininzi zasekhaya (iiNkawu zaseBarbados Green, imongoose, inkitha yeentaka ezishinyeneyo - usenokubona amasele amancinci, abetha umlozi). Inzolo elapha yaphulwa kuphela sisandi sezi zidalwa zincinane zimangalisayo kunye nesandi esiphumla ngokumangalisayo seqakamba. Ukuba ukhetha ubomi obuphezulu, ungaphakathi kwemizuzu engama-20 kulo naliphi na iilwandle, iindawo zokutyela, iiklabhu zasebusuku kunye neevenkile zentengiso eziphezulu apho iSiqithi sigcwele.
Siyavuya ukunishiya nizonwabele kodwa sonwabe ngokulinganayo ukunicebisa ngezinye izinto enizenzayo, iindawo zokutyela ezigqibeleleyo, ukurentisa iimoto njl.njl (emva kuyacetyiswa kakhulu).
Ngenxa yomhlaba, umnqantsa kunye namatye kwiindawo, olu luhlu alubafanelanga abantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-10 ubudala.
Wamkelekile kumava e-Eco StayBus!
Kwiminyaka elishumi elinesithathu eyadlulayo ngoku sakha indlu exhomekeke ngokupheleleyo kwi-octagonal (kusuka kumaplanga athatyathwe kumahlathi azinzileyo eGuyana) kwindawo entle yeehektare ezingama-21 yamahlathi ashinyeneyo 'eDe heart of Barbados'. Lo mmandla, owaziwa ngokuba siSithili saseScotland, ukwalikhaya kwizinto ezininzi ezinomtsalane zendalo zaseBarbados: Umqolomba odumileyo waseHarrison, Ihlathi leentyatyambo, iWelshman Hall Gully, iOrchid World, iiGadi zikaHunte ezintle kunye nezindlu ezininzi ezintle zakudala zokutyala iswekile. I-Ecolodge kunye ne-Eco StayBus, eyaziwa ngabaninzi 'njengesiqithi esingaphakathi kweSiqithi' ngelixa iphuma kumkhondo obethwayo ikude nokuba yodwa; Kukuhamba nje imizuzu engama-30 ukuya kunxweme lwesanti emhlophe entle ngokumangalisayo eBatshebha naseCattlewash (iilwandle ezidumileyo kwihlabathi lokusefa) kunye nemizuzu eli-15 kuphela yokuhamba ukusuka kunxweme lwePlatinam (unxweme lwaseBarbados olutyebileyo lwaseWest).
Umbuki zindwendwe ngu- Grahame And Andrea
Siza kube silapha ukuze sikwamkele xa ufika. Ngokwendalo siza kukubonisa malunga nazo zonke iimpawu kunye nezibonelelo zebhasi kunye nendawo ezingqongileyo. Uyakumenywa e-Ecolodge ukuze ufumane isiselo esamkelekileyo kwaye uncokole. Ngokulinganayo siyavuya ukukushiya kubumfihlo bakho ukuba uyafuna.
Siza kube silapha ukuze sikwamkele xa ufika. Ngokwendalo siza kukubonisa malunga nazo zonke iimpawu kunye nezibonelelo zebhasi kunye nendawo ezingqongileyo. Uyakumenywa e-Ecolodge…